Global Voices teny Malagasy » Sary Tranainy Mampiseho Ny Fahitàna ny Andrefan’i Japana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Novambra 2015 7:08 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Japan circa 1886. Loharano: yves Tennevin , mpampiasa Flickr, nampiasàna ny lisansa ho an'ny daholobe.
Nitily toerana i yves Tennevin  ary nampakatra ny sasantsasany tamin'ìreo sary mahazendana nolokoina tamin'ny tànana  ahitàna an'i Japàna tamin'ny taonjato faha-19, taorian'ny nanokafan'io firenena io indrindra ny varavarany  ho an'izao tontolo izao.
Hita amin'ny sehatra natao ho an'ny daholobe  daholo ireo sary rehetra, ary heverina ho tao Japàna no nalain’ i Adolfo Farsari , teratany Italiana mpakasary, tany amin'ny faramparan'ny 1880. Maro amin'ireo fanontàna navoakany no nolokoina tamin'ny tànana, fomba fanao iray izay nahazatra ihany tao Japàna  tany amin'ny faran'ny taonjato faha-19, rehefa injay nitsidika tao i Farsari.
Raha ny sary nataony no tsaraina, nandeha lavitra nitety ny manodidina an'i Japàna i Farsari, ary nandrakitra saika ny zavatra rehetra nolalovany mihitsy.
Japan circa 1886. Loharano: Tennevin, mpampiasa Flickr, nampiasàna ny lisansa ho an'ny daholobe.
Somary hita mibaribary ihany hoe nasian'i Farsari fikarakaràna ny ankamaroan'ireo sariny. Midika io fa tsy dia milaza mandrakariva ny tena zavamisy loatra ireo sary entiny anehoana an'i Japàna, ary angamba mety nandray anjara tamin'ny fanefena ny fomba fijerin'ny tany ivelany momba ilay firenena vao avy nisokatra, fa tsy tena maneho taratra ny fomba fijerin'i Japàna ny tenany manokana.
Indrisy, tsy ny sary rehetra asongadin'i Farsari no misy maribolana, araka izany dia sarotra ny mamaritra ny toerana nakàna azy ireny.
Japan circa 1886. Loharano: yves Tennevin, mpampiasa Flickr, nampiasàna lisansa ho an'ny daholobe.
Sarotra ny hilaza raha tena izao no mety ho fisitrahan'ireo Japoney ny zaridaina, na fomba iray fotsiny io nanaingàn'i Farsari ny olony hàka toerana ho alaina sary.
Japan circa 1886. Loharano: yves Tennevin, nampiasàna lisansa ho an'ny daholobe.
Mety ho Yokohama ity sary ity. Telopolo taona monja talohan'ny nakàna ity sary ity, mety ho tanàna nilamina nonenan'ny mponjono i Yokohama.
Japan circa 1886. Loharano : yves Tennevin, nampiasàna lisansa ho an'ny daholobe.
Ny sasany tamin'ireo diany nataon'i Farsari dia nitondra azy tany amin'ireo toerana lavitra izay afaka nakàna sary ny endriky ny fiainana andavanandro ho an'ireo olona ivelan'ny tanàndehibe.
Toy ny mpanjono ireto lehilahy ireto, manamboatra bika mba ho an'ny sarin'i Farsari hanehoan-dry zareo ny fandrobohana an-drano ny làkany.
Japan circa 1886. Loharano : yves Tennevin, mpampiasa Flickr, nampiasàna lisansa ho an'ny daholobe.
Maro amin'ny sary nalain'i Farsari no toy ny marika maneho hatraiza hatraiza an'i Japàna.
Fantina goavana iray amin'ireo sary nopihan'i Farsari no azo jerena amin'ny toerana samihafa manerana ny tranonkala. Ny fantin'ny Nagasaki Library Collection  amin'ny sarin'i Farsari dia ahitàna maribolana famariparitana momba ny toerana nakàna ireo sary.
Raha tianao ireo, mety tianao ihany koa ny hitsirika hijery andian-tsary tranainy iray hafa momba an'i Japàna  avy amin'io vanimpotoana io ihany, saingy ilay Japoney mpakasary, T.Enam0, no naka azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/15/76688/
 yves Tennevin: https://www.flickr.com/photos/styeb/
 sary mahazendana nolokoina tamin'ny tànana: https://flic.kr/s/aHsiXBn7bF
 nanokafan'io firenena io indrindra ny varavarany: https://en.wikipedia.org/wiki/Bakumatsu
 sehatra natao ho an'ny daholobe: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
 heverina ho tao Japàna no nalain’: http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/amazing-handcolored
 Adolfo Farsari: https://en.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Farsari
 fomba fanao iray izay nahazatra ihany tao Japàna: https://en.wikipedia.org/wiki/Hand-colouring_of_photographs#Japanese_hand-coloured_photographs_.28circa_1860.E2.80.931899.29
 fantin'ny Nagasaki Library Collection: http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/en/list.php?req=1&target=Farsari
 andian-tsary tranainy iray hafa momba an'i Japàna: http://yeinjee.com/old-japan-photos-t-enami/